War Deg Deg ah: Ciidamada Shabaabul Mujaahidiin oo Jihooyin kala gedisan kasoo galay magaalada Dhoobleey iyo Gaadiid ay ka carareen Maleeshiyadii Axmed Madoobe oo laga heley Howdka Dhoobleey. Beenaale Daahir Calasaw (waagacusub.com) oo daadku qaadey kadib markii uu daan daansaday warbaahinta xortaa ee xaqiiqada tatbisa. SomaliMeMo oo heshay shax Milateri oo ay dejisay AMISOM si ay ugu qabsato magaalada Muqdisho iyo ciidamo taabacsan DKMG-ka oo si qarsoodi ah ku jooga deegaanada ay Mujaahidiintu ka maamulaan magaalada Muqdisho.(Warbixin dheer oo Xasaasi ah).	Nala Xiriir	Walaalkeen Sheikh Mohamed Umal weydiiya wadaad diintii laga bililiqaystay ?? Sh C/Qaadir Mu’min oo xalay Muxaadaro aad u qiimo badan oo ciwaankeedu ahaa (QALADAAD KU JIRA CAQIIDADA) ka soo jeediyey Masjidka Arraxmah ee ku yaala Magaalada Birmingham UK. Beesha deegaanka Iidaale Gobalka Bay oo Hubkii ugu tirada badnaa ku wareejisay Xarakada Shabaabul Mujaahidiin. Xoogaga deegaanka Galgalo oo gaadiid dagaal ku qabsaday dagaalkii maanta iyo Laag iyo Karin oo lala wareegay. Calamada Ilmoland – England, Scotland, Finland, Iceland,Switzerland, Somaliland, & Puntland – oo kan Puntland ugu Foolxun Yahay!. Sarkaal katirsan Xisbul Islaam oo Cod qarsoodi ah laga qabtay isagoo ku faraxsan qabsashadaii Dhoobleey dhiiri gelina u samaynaya Maleeshiyada Axmed Madoobe iyo ONLF.(dhagayso) Xarakada Mujaahidiinta Alshabaab oo si buuxda u joojiyey howlihii Hey’adda WFP ee dalka soomaaliya ( warsaxaafadeed)
Posted on February 28, 2010 by halganka	Iyadoo maalmihii ugu dambeeyey ay isa soo tarayeen dalabaadka ka imaanaya Hey’adda WFP ee la xiriira inay dib ubilaabaan howlihii ay ka wadeen dalka soomaaliya ayaa Xarakada mujaahidiinta Alshabaab waxey maanta soo saartey warsaxaafadeed la xariira arinkaasi kaasi oo gebi ahaanba lagu hakiyey howlihii Hey’adaasi ay ka wadey gudaha dalka soomaaliya.
Cabashada sii kordhaysa oo ay soo jeediyeen beeralayda soomaaliyeed kuwaasoo waayey suuq ay babeecadooda kaga ganacsadaan sababta keentey ay tahey WFP oo raashiin badan soo dajisa xiliga uu dalagu soo go’o. Hey’ada oo qaybisa cunto dhacday kadib markii labaaray bakhaarada WFP waxaa cadaatay in raashinka ku kaydsan uu badankiisu yahey mid dhacay oo aan ahayn mid uu biniaadamku cuni karo. Faafitaanka cuduro badan oo ka dhashay cuntada ay hay’adu qaybisay Raashiinka hay’adu keento oo ah mid dano qarsoon oo ay siyaasadeedna laga leeyahey sida taakuleynta ciidamada Xabashida iyo Murtadiinta. Kadib amarkii kasoo baxay OSAFA bishii koowaad kaasoo lagu joojiyey cutadii WFP wadanka dibadiisa ka keeneysay waxaa cadaatey:
In dadweynaha soomaaliyeed noqday mid isku kalsoon oo awooda inuu beerihiisa fasho,dhamaan beeralaydii horay uga caajistayna ay beerahoodii dib uga howl galeen. In kalsoonidii beeralaydu badatay dalaggoodiinta suuq ay u heleen. In dhamaan goobihii hay’ddu horay raashiinka u gaarsiin jirtey ay noqdeen kuwa soo kobcaya wa soo saarna leh. In Zakawaatkii laga soo aruuriyey ay gaartey dhamaan dadkii tabaalaysnaa. Waxa ala ogeysiinayaa dhamaan dadweynaha,ganacsatada,darawalada xamuulka iyo qof kasta oo qandaraas kula jira ama u shaqeeya hey’ada WFP inuu joojiyo shaqadaas laga bilaabo maanta . Qofkii lagu arko isagoo u shaqaynaya ama la shaqayna WFP ,kadib markii uu amarkan soo baxay,waxaa loo aqoonsanayaa qof gacan ku leh mu’aamaraadka hey’ada qeybna ka qaadanaya bur burinta dhaqaalaha umadda soomaaliyeed sidaas ayaana loola dhaqmayaa.
Filed under: Uncategorized « Mas’uuliyiin ka tirsan Shabaabul Mujaahidiin oo booqasho Indha Indhayn ah ku tegay Dekadda Kismaayo iyo xarumaha kale ee muhiimka ah magaalada Kismaayo. Maxkamadda Islaamiga ee Wilaayada gobalka Banaadir oo xukuno ku ridday rag lagu soo eedeeyay dhac ay ugaysteen Shirkado ganacsi. »